युनिभर्सिटिको बेहाल! | Sagarmatha TVSagarmatha TV युनिभर्सिटिको बेहाल! | Sagarmatha TV
अमृतराज काफ्ले । काठमाडौं-शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरणका कारण देशका बिभिन्न विश्वविद्यालयहरु धराशायी अबस्थामा पुगेका छन् । देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि अघिल्लो वर्षमात्रै स्थापना भएको राजर्षी जनक विश्वविद्यालय समेत राजनीतिकरणको शिकार बनेका छन् । कुल ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये ५ वटा विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन शुरु भएपछि प्रशासनीक काम प्रभावित बनेको छ ।
त्यसोत, ६० वर्ष पुरानो नेपालकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने आन्दोलन नया“ होइन । वर्षैभरि विभिन्न नाममा आन्दोलन हुने त्रिविमा अहिले भने केही प्राध्यापकहरुका कारण मानविकि संकायको एउटा विभागमा तालाबन्दी गरिएको छ । त्यसबाहेक ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य हटाउने निर्णयका कारण थप भद्रगोल बनेको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजर्षी जनक विश्वविद्यालय पदाधिकारी समेत ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भने आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलन जारी छ ।
सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेका कारण अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा समस्या देखिएको केही प्राध्यापकको भनाई छ । त्यसोत राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीका कारण सधै समस्या आउने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेका प्राज्ञहरुको दाबी छ । पछिल्लो १५ वर्षमा आफ्ना कार्यकर्ताला भर्तिकेन्द्रका रुपमा विश्वविद्यालयहरुलाई प्रयोग गर्न लागेपछि समस्या शुरु भएको उनीहरुको बुझाई छ ।
विश्वविद्यालयहरुमा समस्या देखिन थालेपछि अघिल्लो साता सरकारलाई बुझाइएको उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न छुट्टै निकाय गठनको प्रस्ताव समेत गरिएको छ । प्रतिवेदन जस्ताका तस्तै कार्यान्वयन भए शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सकिने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।